26 ruux oo Burcad badeed ay sii daayeen oo gaaray magaalada Nairobi – STAR FM SOMALIA
26 ruux oo Burcad badeed ay sii daayeen oo gaaray magaalada Nairobi
Waxaa magaalada Nairobi gaaray illaa 26 ruux ajaaniib ahaa oo muddo shan sano u afduubnaa Kooxaha burcad badeeda Soomaalida.
Muwaadiniintan oo u kala dhashay dalalka Shiinaha, Filibiin, Indonisia, Taiwan, iyo Vietnam ayaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee afduub u heysteen Burcad badeed Soomaali ah
26-ruux ayaa laga qafaashay Markab lagu magacaabo FV Naham oo la qafaashay bishii March ee sanadkii 2012.
Dadkan ayaa lagu heystay barriga Gobolka Mudug, waxaana la rumeysan yahay in madax furasho aan la shaacin lagu sii daayay.
Intii muwaadiniintan gacanta ugu jireen burcad badeeda ayaa xaalado dhib badan la kulmeen, waxaana intii la heystay dhintay 3 muwaadin.
Sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa hoos u dhac ku yimid afduubkii burcad badeeda ee maraakiibta isticmaasha Badda Gacanka Cadmeed.
Madaxweynaha Hirshabeelle “Doorashada Aqalka sare iyo Aqalka Hoose Jowhar ayay ka dhaceysaa”